I-backlink kusuka emithonjeni ye-PR8 yewebhu ingathinta kanjani isayithi lakho SEO?
Izixhumanisi ezifakiwe ziyizici ezibalulekile kumawebhusayithi. Uma ufuna ukwandisa i-website traffic kanye nokubeka isikhundla, indlela engcono kakhulu yokwenza ukuzuza ama-backlink angu-PR 8. Kunezinhlobo eziningi zemithombo yewebhu ephezulu ongathola ngayo i-backlinks yekhwalithi yekhwalithi ephezulu. Kodwa-ke, akubona bonke abakwa-webmasters abakwaziyo ukuthola ama-backlink kusuka kule mithombo futhi bacabanga ukuthi akunakwenzeka noma kubiza.
Kulesi sihloko, sizoxoxa ngezindlela zokuthola ama-backlink aphezulu e-PR kusuka kumithombo yewebhu yakwa-Google namapulatifomu afana ne-Google +, nabanye. Sizokubonisa ukuthi kulula futhi ukhululekile ukuthola ama-backlink kusuka ku-Google. Ngakho ake siqale!
Indlela yokudala i-PageRank 8 ilandelwa kanjani ngemuva kwe-Google Drayivu?
Lezinyathelo ezilandelayo zizokusiza ukuthi uthole izixhumanisi zangaphandle ezifanele nezangaphandle kusuka ku-Google uphakamise igunya lakho lesizinda. Ngaphezu kwalokho, lezi backlink izokusiza ukwandisa isayithi lakho PageRank futhi uthuthukise ithrafikhi yomuntu emakhasini akho.
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Gmail noma uma ungenayo, dala imininingwane yokungena ngemvume ye-Gmail.
Vula i-Gmail yakho bese uchofoza ingxenye "yeDrayivu yami".
Dala ifolda entsha ku-Google drive. Unganika noma yiliphi igama kwifolda.
Emva kwalokho dala ifayela le-HTML ku-notepad. Lapha kufanele ufake isixhumanisi sesayithi lakho kumbhalo osebenzayo we-anchor. Ukufeza lo msebenzi, udinga ukungena ikhodi ekhethekile ye-HTML ngebhulogi yakho noma i-URL yesayithi.
Ama-Backlink yamahhala ku-Iwebhusayithi yakho
Uma ikhodi eseqedile, udinga ukwenza le folda nefayili ibonakale ku-Google bots. Qinisekisa ukuthi usebenzisa umaki wokulandelela nge-link yakho yewebhu. Bese uchofoza inkinobho ethi "Yabelana" futhi wabelane ngefayela lakho emphakathini.
Izilungiselelo zokwabelana ezivulekile bese ukhetha inketho ethi "Public on the web". Ifayela lakho livulekile kuwo wonke umuntu manje.
Chofoza kufolda bese ukhetha inkinobho "Imininingwane nemisebenzi".
Ngakwesokudla, uzobona ingxenye "Imininingwane". Kopisha isixhumanisi sakho lapho.
Vula ithebhu entsha kusiphequluli sakho bese unamathisela khona i-URL ekopishiwe.
Faka igama lakho lefayela bese ufaka.
Ngenxa yalokho, uzothola ikhasi elidingekayo ngokulandela i-backlinks.
Indlela yokudala i-PageRank 8 ilandelwa kanjani ngemuva kwe-Google Plus?
I-Google Plus iyi-platform yezokuxhumana yomphakathi i-Google enikeza ithuba elimangalisayo labahloli be-SEO ukudala ezinye izinto ezilandelayo ze-backlinks. Ungakha i-PR8 elandela izixhumanisi ezingemuva e-About section nengxenye yezindaba. Ngaphezu kwalokho, ungakha izixhumanisi kokubili Ikhasi nePhrofayli usebenzisa umbhalo wakho we-anchor. Konke okudingayo ukugcwalisa ulwazi mayelana nawe ezigabeni ezingenhla bese ufaka ama-backlink angenayo kusayithi lakho lapho.
Indlela yokudala i-PageRank 8 ilandela izixhumanisi zangemva kwe-Wikipedia?
Isiqephu sokuqukethwe esiwusizo esakhiweni sakho noma ebhulogi singasetshenziswa njengomthombo we-Wikipedia. Ngokucwaninga indawo yakho yobuchwepheshe, ukungeza kwisihloko esifanele kanye nokugunyaza ukucaphuna kuzoklama ama-backlink amaningi aphezulu we-PR10 kumthombo wakho wewebhu Source .